Julio Cesar Benitez wuxuu yimid waddanka Spain dhamaadka sannadihii 1950-meeyadii si uu waayihiisa ciyaareed uga sii wato horyaalka LaLiga. Waqtiyo kooban oo uu joogay labada kooxood ee Real Valladolid iyo Real Zaragoza waxa uu laacibkan hore ee reer Uruguay hore u qaaday tallaabooyin waaweyn oo uu ka mid noqday Barcelona.
Sannadihii uu xidhnaa garanka Barcelona, waxa uu ahaa mid dagaalku kasoo horreeyo oo neceb in lagu jabiyo garoonka dhexdiisa, kooxdiisuna guul-darro qaadato, waxaanay halgan dagaal qadhaadh ahaa ay iskaga hor yimaaddeen laacibkii Real Madrid ee Paco Gento.
Julio Cesar Benitez waxa uu wax walba u sameeyey sidii uu weeraryahannadii caanka ahaa ee Real Madrid uga joojin lahaa inay gaadhaan goolka Barcelona.
Maalintii murugada iyo dibu-dhigistii El Clasico
April 6, 1968kii ayay Barcelona iyo Real Madrid ku ballansanaayeen kulankooda magaca gaarka ah sita ee El Clasico, waxaana labada kooxood oo isku diyaarinaya ciyaarta si lama filaan ah usoo dhacay war sheegaya in Julio Cesar Benitez uu geeriyooday.
Xaqiiqo ayay ahayd, waxaana ciyaaraha Spain oo dhan ay galeen murugo iyo baroor-diiq.
Afar maalmood ka hor ciyaarta El Clasico ayuu xanuunsaday Julio Cesar Benitez oo ay da’diisu ahayd 27 jir, waxaanu u tegay dhakhtarkiisa iyo tababarihiisa oo uu u sheegay in uu dareemayo in xaaladdiisu aanay caadi ahayn. Maalintii xigtay, waxa uu ku qaatay guriga isagoo dareemaya xummad ka hor intii aanu maalintii xigtay kusoo laabanin tababarka kooxdiisa. Laga bilaabo waqtigaas waxa si degdeg ah usii xumaanaysay xaaladdiisa.
April 4, Julio Cesar Benitez waxa laga saaray liiska ciyaartoyda Barcelona ee kulanka El Clasico ee Real Madrid, waxaana wararkii suuqa ku jira maalintaas ay sheegayeen in xaaladdiisa caafimaad aad usii xumaatay. Waxa la isla dhex-marayay inuu ku sumoobay cunto iyo suurtogalnimada inuu ku dhacay Joojis ama Cagaarshow.
Dhakhaatiirta cusbitaalka ayaa sheegtay waqtigaas inay ka daaweeyeen waxay ku sheegeen infakshan, ciyaartoyda kooxdiisana waxa lagu wargeliyey xaaladdiisa. Ugu dambayntii waxa uu kusoo laabtay gurigiisa oo uu ku geeriyooday April 6 oo ahayd maalintii ciyaartu dhacaysay.
Warbixintii rasmiga ahayd ee ay dhakhaatiirtu soo saareen ayay ku sheegeen in Benitez uu u dhintay xanuunka Sepsis oo ah infakshan jidhka oo dhan ku faafa, kaas oo wixii keenay aanay garanin.
Ciyaarta Barcelona iyo Real Madrid ayaa dib loo dhigay laba maalmood oo kaliya. Markii ay labada kooxood wada ciyaareen, waxay ku kala baxeen barbarro 1-1 ah, laakiin waxa la arkayay Gento oo murugaysan oo ilmada xajisan la’, maadaama uu ninka geeriyooday ahaa midka ay iskugu badan yihiin garoonka dhexdiisa.
Aaskiisa qaran ayaa loo sameeyey, waxaana ka qayb-galay ciyaartoyda Barcelona iyadoo guushii Copa del Rey na loo hanneeyey isaga.
Illaa maanta, Benitez waxa gudaha Barcelona lagaga xasuustaa dareenno isku milan oo iskugu jira hal-adaygiisii iyo murugado.